बाँच्नैपर्छ भन्दै क्यान्सरलाई जितें - विशेष - नारी
बाँच्नैपर्छ भन्दै क्यान्सरलाई जितें
सपना भुसाल, इन्टेरियर डिजाइनर
इन्टेरियर डिजाइनिङमा व्यस्त रहँदै आएकी सपना सापकोटा भुसाल (उनी नारी मासिककी इन्टेरियर डिजाइनसम्बन्धी स्तम्भकार समेत हुन्) आफ्नो जीवनबाट निकै खुसी थिइन् । परिवार र काममा व्यस्त सपनालाई खासै ठूलो शारीरिक समस्या पनि थिएन । एकदिन घाँटीमा असजिलो महसुस भयो अनि छिट्टै थाक्ने, गल्ने महसुस हुन थाल्यो । चिकित्सकलाई देखाएर साधारण औषधि खाइरहेकी थिइन् तर उनलाई सन्चो भएन । नसासम्बन्धी केही समस्या हो कि भनेर डा. ईशा ढुंगानाकहाँ देखाउन पुगिन् । डाक्टर ढंगानाकै सल्लाहमा एम आर आई गराउँदा रिपोर्ट नर्मल नै आयो र कहिलेकाहीँ धेरै मोबाइल, ल्यापटब चलाउँदा पनि यस्तो समस्या हुने भएकाले औषधि थपियो ।
यता सपनालाई पीडा सँगै ज्वरो पनि आउन थाल्यो । डा. ईशाले रगत जाँच गराउँदा ध्द्यऋ ७ हजारदेखि १४ हजारसम्म हुनुपर्नेमा ४८ हजार देखियो । रिपोर्ट गडबड भयो कि भनेर पुन: रगत जाँच गराउँदा बढेर ७५ हजारको हाराहारीमा पुगेको देखियो । त्यसपछि सपना डा. ईशाकै सल्लाहमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा डा. विशेष पौडेलकहाँ पुगिन्, तर त्यो दिन डा. विशेष भेटिएनन् । त्यहाँ डा. अमितले सपनालाई ब्लड क्यान्सर नै हो, आइतबार आउनू भने । शुक्रबारको त्यो रात सपनालाई जिन्दगीको अन्तिम रातजस्तो लाग्यो तर उनका श्रीमान्ले उनलाई सान्त्वना मात्र दिएनन्, हिम्मत नहार, तिमीले बाँच्नुपर्छ भनी हौसलासमेत बढाए ।
भोलिपल्ट घरपरिवारमा सबैलाई क्यान्सर भएको कुरा बताएर आइतबार पुन: अस्पताल पुग्दा सपनाको आँखामा आई हेम्ब्रेज भैसकेको थियो । आँखामा रातो–रातो रगत देखा परिसकेको थियो, तर त्यसले उनको दृष्टिमा कुनै असर पारेको थिएन । डा. विशेषले क्यान्सर ठहर गर्दा उनीहरू उपचारका लागि भारत जाने तयारीमा जुटिसकेका थिए तर डा. पौडेलले भारत लाने अनुमति दिनु भएन । बिरामीको अवस्था गम्भीर छ । एक महिना यहीँ राखेर उपचार गराउनुपर्छ । लाने हो भने तपाईंहरूको विचार भनेपछि भारत लाने कुरा सामसुम भयो । उपचारका क्रममा धेरैजना भारत गएर फेरि नेपाल आएका पनि भेटिए । त्यसपछि सपनाले नेपालमै उपचार गराउँछु भन्ने निर्णय गरिन् ।
फोर साइकल केमो गर्नुपर्ने सुझाव थियो । त्यसबीच धेरै समस्या आए । छातीमा इन्फेक्सन पनि देखियो । शरीर कमजोर भएपछि जेले पनि जहाँ पनि सताउने सपनाले अनुमान लगाइन् । दोस्रो केमोपछि राम्रो भएर घर फर्कने क्रममा स्टुलको ब्याक्टेरिया क्लिप सेल ब्लडमा कसरी पसेछ, त्यसैकारण हाइ फिबर भएर क्रिटिकल अवस्था देखियो । त्यसको औषधि जम्मा एक पटक मात्र बनेको रहेछ । अन्तिम आशा त्यही एन्टिबायोटिक थियो । खाना खान कठिन, ट्वाइलेट गर्न कठिन, भोमिटिङ भैरहने, ज्वरो १ सय ६ डिग्रीसम्म आइरहने । सपनाका ७ वर्षका जुम्ल्याहा छोराछोरी थिए । अरूका साना छोराछोरी भेट्न आउँदा आमालाई नचिनेको देख्दा सपनालाई एउटै डर थियो, कतै मलाई पनि मेरा छोराछोरीले चिन्दैनन् कि ? त्यही डरले सपनाले सुरुमै आफ्नो केश, आँखीभौंदेखि शरीरका सबै रौं झर्छन् भनेर छोराछोरीलाई तयारी गरिसकेकी थिइन् । ऐना हेर्दा सपना आफै तर्सिन्थिन्, तर छोराछोरीले थयग बचभ यियपष्लन mयचभ दभबगतषग ितजभल दभचयचभ भन्दा उनी भावविह्वल भइन् ।
सपनाको अस्पताल बसाइकै क्रममा २०७२ सालको भूकम्प गयो । क्यान्सरसँग लडिरहेकी सपनासँग अस्पतालको चौरमा समेत सुतेको अनुभव छ । उनका लागि देशमै भुईंचालो, मनमै भुईंचालो थियो । शरीरमा भएको पीडा खप्न नसकेर मर्फिन इन्डेक्स पनि धेरै पटक लगाइयो । त्यस्तो पीडा खप्न नसक्दा र यो नै जीवनको अन्तिम क्षण हो जस्तो महसुस हुँदा पनि छोराछोरी र परिवारका लागि बाँच्नुपर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन भनेर आफैलाई सम्झाउँथिन् । त्यतिबेला उनलाई आँखा बन्द गर्न पनि डर लाग्थ्यो, कतै आँखा बन्दको बन्दै हुने त होइनन् ? एन्टिबायोटिक खाएको ३ दिनमा ज्वरो घटेर १ सय डिग्रीमा पुग्यो । त्यसपछि उनमा यति आत्मविश्वास बढ्यो कि अब मलाई कुनै रोगले समाउन सक्दैन, मैले क्यान्सरलाई जितें भन्ने भयो ।
शारीरिक रूपमा सपना निकै कमजोर भए पनि मानसिक रूपमा बलियो भैसकेकी थिइन् । यो आत्मविश्वास बढ्नुमा उनका श्रीमान्को प्रमुख भूमिका थियो । चैत १५ गते सँगै अस्पताल छिरेका उनका श्रीमान् सपनालाई निको बनाई एकैपटक साउन १५ गते त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए । उनले कुनै पनि दिन सपनालाई छाडेनन् । क्यान्सरलाई जितेपछि उनी हरेक कुरामा सफल हुँदै गइन् । आफैं इन्टेरियर डिजाइन कम्पनी खोलिन् । क्यान्सरसँग लडेर जित्नु नै सपनाको जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट भएको छ । भुसाल भन्छिन्–क्यान्सर जीवनको अन्त्य होइन क्यान्सरसँग लड्न सके त्यो जीवनको सुखद् सुरुवात पनि बन्न सक्छ ।
माघ २८, २०७५ - क्यान्सरले हार्‍यो मैले जितें : एन्जेलिना जोली
श्रावण १८, २०७४ - रुन्चे गीत गाउँदिन भन्दै योजना